एमालेमा चौथो वरियतामा राखिएपछि बादल असन्तुष्ट ! – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठसमाचारएमालेमा चौथो वरियतामा राखिएपछि बादल असन्तुष्ट !
एमालेमा चौथो वरियतामा राखिएपछि बादल असन्तुष्ट !
शुक्रबार बसेको नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले स्थायी कमिटी पुनर्गठन गरेको छ ।
स्थायी कमिटीमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी पृष्ठभूमिका नेता रामबहादुर थापा (बादल) लाई चौथो वरियतामा राखिएको छ ।